मिर्गौला फेल भएर परिवारका तीन भाइको मृत्यु, एक बिरामी
टाेपलाल अर्याल ,??????
२०७६ पौष २९ मंगलबार ०७:१०:००
टाेपलाल अर्याल, ??????
मुसीकोट नगरपालिका ७ बामी अज्र्याका एकै परिवारका तीन भाइको मिर्गौला फेल भएर मृत्यु भएको छ । अर्का एक भाइ मिर्गौला फेल भएकै कारण जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । स्वर्गीय कलाधर न्यौपानेका पाँच भाइ छोरामध्ये तीन भाइको मिर्गौला फेल भएकै कारण मृत्यु भएको हो । कान्छा छोरा भोला न्यौपाने डेढ वर्षदेखि मिर्गौला रोगले थलिएका छन् ।
सबैभन्दा पहिला जेठा दाजु प्रकाशको मिर्गौला रोगका कारण ३१ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको भोलाले बताए । ‘माइला दाजु तारापतिको २८ वर्ष र साइँला दाजु डिलारामको ३३ वर्षको उमेरमा मिर्गौला रोगकै कारण मृत्यु भयो,’ भोलाले भने, ‘मेरो पनि डेढ वर्षदेखि दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेका छन् । अहिले उपचारकै क्रममा छु ।’
भोलाका साइँला दाजु डिलारामको १७ मंसिर ०७५ मा मृत्यु भएको हो । ‘साइँला दाजुलाई मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिए पनि त्यसले ६ वर्ष मात्रै काम ग-यो,’ भोलाले भने । पाँच भाइ छोराका पिता कलाधरको पनि ०५५ सालमा मृत्यु भएको थियो । शरीर सुन्निने समस्याका कारण कलाधरको मृत्यु भएको छिमेकी पार्वती लामिछानेले बताइन् । त्यतिवेला अहिले जस्तो रोप पत्ता लगाउन सजिलो थिएन । कलाधरको के रोगले मृत्यु भयो नखुले पनि स्थानीयले मिर्गौला रोगकै कारण उनको मृत्यु भएको आशंका गरेका छन् । आमा केतुकलाको पनि मृत्यु भइसकेको छ । भोलाका काइँला दाजु सुरज भने वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदीमा छन् । उनलाई मिर्गौला समस्या छ/छैन खुलेको छैन ।
डेढ वर्षअघिसम्म भोला भारत हरियाणामा मजदुरी गर्थे । ‘उतै हुँदा एक्कासि मलाई पनि मिर्गौलाको समस्या देखियो,’ भोलाले भने, ‘अहिले पनि हरियणास्थित मनिमल्टी स्पेसलाइट हस्पिटलमा हप्ताको दुईपटक डायलाइसिस गराइरहेको छु ।’ भोला मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न चाहन्छन् । उनका श्रीमती र एक छोरी छन् । ‘सन्तानका लागि पनि अझै बाँच्ने मन छ,’ भोलाले भने, ‘तर, आफ्नो आर्थिक अवस्थाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आफन्तसहितका सहृदयीसँग गुहार मागेको उनले बताए । भोलाको उपचारका लागि सहृदयीले झन्डै चार लाख संकलन गरिसकेका छन् । बुटवलस्थित बामी विश्व सम्पर्क मञ्च जापान शाखाले संकलन गरेको तीन लाख ९१ हजार ४८ रुपैयाँ भोलालाई प्रदान गरिएको छ । तिलोत्तमा ८ का चिन्तामणि चालिसे र बामीका राकेश केसीले पनि भोलालाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
#भोला न्यौपाने # मिर्गौला फेल